Is Diidooyinka Dib U Dhaca Doorashada Maxaad Ka Ogtahay?...Soo Diyaarintii Yasin Calase
(Hadhwanaagnews) Friday, January 11, 2019 20:38:20
Kadib kulamo badan
oo intooda badan aan wax natiijo ah aanay ka soobixin waxa lasoo gaadhay maalintii xeerka dorashooyinka Qodobkiisa 9aad siiyay in ay Komishanku ku sheegan in aan doorasho dhacay maalintas oo ahayd 28 Nov 2018. Maalintaas oo ah 120 cisho ka hor maalinta doorashadda ka horaysay. Sida uu dhigayo xeerku waxa 15 cisho kadib ay ahayd in madaxweynahu u gudbiyo golaha guurtida si ay mudo kordhin ugu sameeyan golayaasha hada jooga.
Waxa mudada xeerku sheegay loogu gudbin waayay waxa ay ahayd in saddexda xisbi kasoo heshiiyaaan arimaha ay isku khilaaafsan yahiin si ay go'aan ay isku raacsan ayahiin ugu gudbiyaan Guurtida maadama dib u dhacaninahaa mid uu sababay muran siyaasadeed oo u dhaxeeya xisbiyadda qaaar. oo ay ugu horeyso in xisbiga Waddani lagu qanciyo in uu daayo Komishanka haatan jooga si ay doorashada u qabtaan 2019.
Halkan hoose ka eeg isdiidoyinka ay tahay in aad dhugato si aad go'aankaga cida leh eeda dib u dhaca ugu salayso.
6. Iyadda oo aan laga gaadhin wax heshiis ah khilaafkii xisbiyadda ee Komishanka jooga laga qabay ayaa madaxweynahu waxa uu 9 Jan 2019 u gudbiyay golaha guurtidda codsiigii mudo kordhinta wakiiladda ee hore dib loogu dhigay in heahiis laga gaadho mudada doorasho lagu qaban karo ee korodhsiin loo samayn karo golayaasha jooga. Isaga oo ku sheegay madaxweynahu sababta dib udhaca doorashadda ku keentay labbo qodob oo kala ahaa "Arimo farsamo iyo Dhaqaale".!!!!!
Warqadda uu madaxweynahu u qoray Guurtidda waxa aad mooda in aan la tix galin wadahadaladii iyo dhexdhexaadintii asxaabta waxaana marag u ah waxa ay maanta soo wadda saaren xisbiyadda UCID iyo Kulmiye ee ay ku sheegen go'aano ay isla qaaten kuwaas oo nuxurkoodu yahay in labadooda 2019 doorasho loo qabto.